OnePlus na-ebipụta mbido mbụ nke gam akporo 6.0.1 na OnePlus X | Gam akporosis
El OnePlus X Ọ bụ ekwentị ntinye nke ụlọ ọrụ a na n'ime afọ ole na ole jisiri ike ido onwe ya n'ihu ụdị ndị ọzọ ekele dị nnọọ ole na ole ụdị. Onye mbụ OnePlus dọọrọ uche nke ukwuu maka ụzọ pụrụ iche ọ na-esi ere onwe ya, ebe ọ bụ iji nweta ya ịkwesịrị ịnwe oku. Ejiri mpempe akwụkwọ nye akwụkwọ ịkpọ oku a, ma nlebara anya maka ekwentị a gbagoro n'ụzọ dị oke oke, na-eme ka ọ gbasaa dị ka ụfụfụ.
The OnePlus X abụghị ọnụ nke emelitere ngwa ngwa, ya mere, akụkọ a, maka ndị nwere ya, nwere afọ ojuju, ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ na Lollipop, ọnụahịa ahụ ebipụtala mbu nke OxygenOS dabere na gam akporo 6.0.1 Marshmallow.
Naanị ihe ROM a bụ nke obodo kere n'onwe ya, nke na-abụghị ụdị ọrụ gọọmentị nke OTA rutere. Nke a pụtara na ị nwere ike ịnwe nsogbu arụmọrụ na nkwụsi ike. Ga-eji aka gị gbanye ya, yabụ na ọ bụghị ntinye ewepụtara maka onye ọrụ nkịtị, mana ị ga-eji ụdị nwụnye a.
Nwere ike ịgafe na Nzukọ OnePlus ebe inwere ike chọta ndetu niile n'ụzọ zuru ezu. OnePlus na-ekwusi ike na ụlọ a na-agụnye ngwungwu akara ngosi ọhụụ niile, ọhụụ ọhụụ nchọta Google, akwụkwọ ozi akwụkwọ ahụaja ọhụrụ, ngwa ole na ole ọhụrụ (OnePlus Music Player and OnePlus Gallery), na ọtụtụ ndị ọzọ.
A na-ahazi nbudata ahụ site na nke ya budata ibe site na OnePlus, na ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe ekele na, ndị rụnyere ya, kekọrịta nzaghachi gbasara ya. Na-ekwukwa na post a dị oke, nke pụtara na OnePlus nwere ike wepu njikọ nbudata na oge ụfọdụ mgbe ọ natara nzaghachi dị mkpa.
Ọ ga-abụ ihe amamihe ichere ntakịrị iji nweta nsụgharị ikpeazụ, ọ bụ ezie ọ bụrụ na ị chọrọ inwe marshmallow na OnePlus X gị, ị nọ otu nzọ ụkwụ ịnweta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » OnePlus na-ebipụta gam akporo Marshmallow nke mbụ wuru maka OnePlus X
Samsung na-arụ ọrụ na emelitere emelitere nke Galaxy J7